Enkosi, squidoo! (Shoemoney qaphela) | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 26, 2007 Lwesine, Okthobha 29, 2015 Douglas Karr
Kule mpelaveki ndothuswe luluvo olucacileyo lweblog blog… indawo ekuyiwa kuyo i-URL ibiyi Isikwidi ilensi. Ukuba kukho umntu omnye kweli lizwekazi ongenakuma ugaxekile, mhlawumbi kunjalo Seth Godin, Umbhali we Imvume yokuThengisa kunye nomsunguli weScidoo.
Qaphela ku-Spammers: I-squidoo mhlawumbi ayisiyondawo ifanelekileyo yokubeka ivenkile.
Ngapha koko, ndimane ndilahla i-squidoo inqaku elimnandi lokuba ndiphonononge i-lens ekuthethwa ngayo kwaye ndaziva ngathi kukho umntu othumela umyalezo ebhodini. Namhlanje (kungoMvulo), ndifumene inqaku elinobubele kwiqela laseScidoo ukuba bajonge iilensi zamalungu kwaye bekucaca ukuba yayilungiselelwe njengephambili kwintengiso yokubambisana efunyanwa nguSpam. Bayikhubazile iakhawunti. Ndiqinisekisile kwaye ihambile.
Kwiveki ephelileyo, mhlawumbi uve into "enkulu yokwenza" malunga neShoemoney ilahliwe kwi-MyBlogLog emva wafaka ii-ID zomsebenzisi zamanye amalungu kwindawo yakhe… Isiphene kwimodeli yabucala ye-MBL. UShoemoney sele ebuyisiwe emva kwenqaku elivela kwi-MBL kwibhlog yabo malunga nesigameko kunye nokubuyela umva.
Nantsi into endiyithathayo. Andinanto ngokuchasene noShoemoney kwaye ngokuqinisekileyo andinanto ngokuchasene neMyBlogLog. I-MyBlogLog ibe yintsikelelo kwibhlog yam kunye nabanye ekuvezeni okusifumene. Kodwa ke ndingayithetha le nto… Ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba xa uShoemoney wayewa, kungenxa yokuba MBL wayexhalabile ngemfihlo yabanye iibhlog njengoko uShoemoney eqale wathumela ii-ID ezintathu emva koko wongeza ezinye.
Andiyikholelwa lo nto MBL ebenokhetho… wayezokuya kude kangakanani uShoemoney? Ngaba wayezakubeka ikhulu phaya? Iwaka? Ngaba wayebhale uhlobo oluthile lwe-SQL yenaliti apho wayekhuphela kwindawo yokugcina izazisi? MBL Ngokuqinisekileyo bebengazi ngoko bamsika… ngokukhawuleza. Oko kwakulungile kuthi sonke.
Kwakungekho malunga nokugweba uShoemoney, yayikukusikhusela. Ayisiyonto intle leyo? Ngaba asiyiyo le nto siyifunayo? Kwisithuba seyure enye, umthengisi uqalise ukuzikhusela ekunokuthi kuthintele uhlaselo lokhuseleko.
… Buyela eSkidoo, eShoemoney - nceda uqaphele:
Ndixele umba kwinkampani kwaye ndibanike ixesha lokuphendula baphendule. Ndifumene i-imeyile yesiqinisekiso ebendibulela ngokwazisa kwabo, baphande umba, kwaye bathembisa ukuwusombulula ngexesha elifanelekileyo. Ukufika kwam ekhaya namhlanje, ndikhangele kwaye umsebenzisi kunye neelensi zabo bezimkile.
Unoko engqondweni, xa ufumana umngxunya wokhuseleko okanye ukhupha imveliso, unetyala lakho kubasebenzisi bakho ukuba uxele ulwazi ngexesha elifanelekileyo kwaye ubanike ixesha lokuphendula. Ukujonga emva ngama-20/20, kodwa ngendimhloniphile uShoemoney ngakumbi ukuba bendifundile Ukuthengisa iPilgrim ibhlog yokuba uShoemoney wayesebenze neMyBlogLog ukucofa umngxunya wokhuseleko kubusuku obudlulileyo.
UShoemoney ngewayenike ingxelo yokuqhekeka, njengoko wayenako MBL Kwaye babenakho bobabini ukukhankanya ukuba ukusukela kwixesha lengxelo ukuya kwixesha lolungiso kwakungaphantsi kweyure enye. Ukuba abaphenduli, emva koko yibambe! Kodwa musa ukuthumela i-loophole, bagcobe, kwaye ulinde ukubona ukuba kwenzekani. Oku kubi kumntu wonke.
Ngokuxela umba kwaye ulinde impendulo, bekuya kubangela ukuphazamiseka okuncinci, kuthintelwe ukuqhankqalaza, kuthintelwe ukupapashwa kwe-gazillion kwiiblogi ezininzi, kwaye bekuya kubagcina abo basebenzisi kwi-ID yabo beboniswa… impumelelo kubo bonke abantu. Ngendimbulele uShoemoney nam ngendibulele MBL. Ibizakubonisa ukuba bobabini bajonge mna nawe.
Ewe ewe ... enkosi, Gil (ukusuka Isikwidi). Enkosi, Seth! Ndiyabulela ngokuthatha ixesha lakho ukulungisa lo mbandela kwaye ujonge kuthi sonke.
I-PS: Andikhangeli ukuba idabi lomlilo liqale. Ndiyamhlonipha uShoemoney-ungamandla amakhulu ebhlogger ngokulandela okumangalisayo. Unetalente kwaye uphumelele kakhulu. Ndiyathemba ukuba nesiqingatha sesichengeni sokuba wayenosuku olunye. Ndifuna ukubeka uluvo lwam phaya kwaye ndiyathemba ukuba uza kuyicinga kwakhona le ndlela xa kusenzeka into enje kwixa elizayo. Ngaphandle kwamathandabuzo uyakufumana imiba eyongezelelweyo nezinye izicelo… Ndijonge phambili kuye ekuncedeni ekusikhuseleni sonke!
Feb 26, 2007 ngo-8: 06 PM
Andihlali ndithatha inxaxheba kwii-flamewars… ixesha elininzi lokuntywila kwaye akukho nzuzo ininzi kuloo =)
Ukuphoswa yimbali eninzi kunye nezinto ezenzeka emva kwezigcawu kodwa into ye-mybloglog yayiyeyona veki iphelileyo
Feb 26, 2007 ngo-8: 10 PM
Enkosi ngokundwendwela! Ndiyayixabisa ngokwenene kwaye ulungile-ndingumntu wesithathu kule nto ukuze ukuqonda kwam kungabinakho kwaphela.
Ndiyayixabisa kakhulu inyani yokuba ungathathi nxaxheba kwiimfazwe zelangatye, ndiyazihlonipha iiblogger ezithintela ukungqubana (kwaye ayisiyiyo nenjongo yale nto).
Ndijonge phambili kunxibelelwano olungcono phakathi kweemveliso nabantu, ukusebenzisa iibhloko kunye neepulpiti zokungcungcuthekisa ngokufanelekileyo, kwaye ndinike abantu isibonelelo sokuthandabuza ukuba benze okulungileyo.
Uyigrobile i-MBL intle okwethutyana apho. Ndiyathemba ukuba izinto zilungisiwe.
Enkosi kwakhona ngokundwendwela! Ndiyathemba ukuba uza kubuya.
Feb 26, 2007 ngo-11: 05 PM
Lo mfo unokuhlelwa njengeyona mpazamo inkulu. Ezo zinto zincinci singacingi ngazo ngamanye amaxesha ziyabuya zize kusikhathaza. Akusekho zinkcazo ngenxa yobuyatha obubandakanyekayo… ..
Feb 27, 2007 ngo-8: 23 PM
Inqaku elilungileyo olwenzileyo apho!